Azia Atsinanana · Jona, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsinanana · Jona, 2011
Novambra 2020 9 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Jona, 2011
Singapaoro20 Jona 2011
Antsoina hoe Trano Fitaizan'i Nightingale ilay Toeram-pitsaboana, kanefa hita fa lavitra dia lavitra amin'i Florence Nightingale ny ataon'ny infirmiera. Tafintohina sy sanganehana ireo Singaporiana taorian’ny fahitana ilay horonantsary miafina mampiseho ny fampijaliana natao tamin’ilay ramatoa 75 taona tao amin’io toeram-pitsaboana io, nalefa tao amin’ny YouTube izany ny herinandro lasa teo....
Singapora : Fanentanana “Vonjeo ny tontolon'ny feso mampalahelo”
Singapaoro18 Jona 2011
Feso dimy amby roapolo no nosamborina amin'ny maha dia azy ireo ka nogadraina ao amina toeram-pilalaovana sy fikarakaram-batana iray. Nanao hetsika fanangona-tsonia ny mpisera sy ny mpitia biby hamela malalaka ireo biby ireo.
Shina17 Jona 2011
Filipina: Mpanoratra tantara voahoso-potaka taminà fakàn-tahaka
Filipina16 Jona 2011
Alfred Alfred "Krip" Yuson, mpanoratra tantara Filipiana nahazo mari-pankasitrahana, voatonotonona tamin’ny fankatahaka lahatsoratrin’ny toeram-pandraharana izay feheziny tao amin’ny toeran-pandraharana fironana vaovao iray.Indreo ny fihetsehana avy amin’ny Filipina bilaogisifera.
Kambodza15 Jona 2011
Natsangana tao amin'ny facebook ny vondron'ny Vehivavy Kambodziana ao amin'ny fandraharahana ny volana Novambra 2009 mba hizarana ny traikefa ananan'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny hisiana tambazotra ao Kambodza. Nanomboka hatreo, dia nisy hatrany ny fivoriana notontosain'ny fikambanana izay notohanan'ny Famatsiambola Iraisampirenena ho amin'ny Fiarahamiasa ao Kambodza. Ny herinandro...
Shina: TOhodranon'i Three Gorges , Fotoana Natao Hisainana
Shina05 Jona 2011
Nandritra ny 17 taona nilaina nananganana azy ary mandra-pahatongan'ny fahavitany tamin'ny Oktobra2008, nidehaka i Sina fa io tetikasa io dia hiditra ao anatin'ny asa fananganana sy zava-mahatalanjona erantany. Tao amin'ny fivorian'ny komity mpitantanana ny Filan-kevi-panjakana natao ny 18 May teo, dia nisy fanambaràna iray navoaka nilaza ny voka-dratsy goavana entin'ilay...
Malezia03 Jona 2011
Shina03 Jona 2011